Boky Malagasy PDF azonao vakiana mandritra ny fihibohana – Blaogin'i Voniary
Maro no very hevitra amin’izao fihibohana noho ny valanaretina Covid-19 izao. Ny fitaintainana sy ny tahotry ny fianahan’ny aretina etsy andaniny. Ny fahasahiranana ara-bola, ara-pitaovana, ara-pivezivezena sy ny maro hafa ateraky ny fepetra sy sakana maro isan-karazany koa etsy ankilany. Ao anatin’izao vanim-potoana mahavery fanantenana izao indrindra no anolorako anao ny boky “Raiso an-tanana ny fiainanao” amin’ny endrika PDF. Vinavina efa ela ny hamoaka ity boky ity fa izao vao tontosa satria izao angamba no fotoana.
Raiso an-tanana ny fiainanao
Lahatsoratra roapolo notsongaina avy ato amin’ny Blaogin’i Voniary no mandrafitra ity boky ity. Lahatsoratra natao hanampy ny tsirairay hiroso, hiatrika olana sy hitraka, hahay hankafy fiainana, hanana fitoniana sy fiadanana anaty ary hijoro amin’ny maha-izy-azy. Mandalo fotoan-tsarotra tokoa ny ankamaroan’ny Malagasy ankehitriny ary anisany manome hery ny famakiana boky mikasika ny fampivelarana ny isam-batan’olona toy itony.
Anisan’ireo nisedra olana manokana koa aho tamin’ny voalohandohan’ny fihibohana. Ny famakiana ireo lahatsoratra tato amin’ny blaogy no anisany nanampy ahy. Mety misy tahaka ahy koa any ho any, mila fanohanana sy fankaherezana. Izany no nahatapa-kevitra ahy hamoaka ity boky ity amin’izao fotoana izao.
Tsy izay ihany anefa fa ny toe-tsaina mpandresy sy ny fijery miabo mihitsy no tiana avohitra ao anatin’ny boky. Maro ny hafatra ho an’ireo mikasa hanangana orinasa na tetikasa sy ireo maniry hanatanteraka nofinofy ary koa ireo olona maniry hivelatra, hijoro, hahomby, hiaina malalaka. Fanaon’ny Blaogin’i Voniary hatrany ny manolotra voambolan-tsehatra. tsy latsa-danja amin’izany ity indray mitoraka ity satria mba hanampy ny rehetra dia nasiana voambolana momba ny fampivelarana ny maha-olona sy ny fijery miabo, dikanteny malagasy sy frantsay ao amin’ny fiandohan’ny boky.
Indro ny hevitr’i Nivo Lalandy, mpandrindra ny pejy « Natioraly Happy » mivoy ny fampivelarana ny isam-batan’olona amin’ny alalan’ny fankafizana ny volo natoraly sady mpampianatra Yoga.
I Voniary sy ny fampivelarana ny isam-batan’olona
Mety maro no ho gaga hoe lasa manao fampivelarana ny isam-batan’olona indray i Voniary. Raha mpanaraka ny blaogy anefa ianao tsy tokony ho gaga mihitsy. Teny filamatry ny Blaogin’i Voniary hatrany am-piandohana ny hoe « ho fanairana hambom-po sy ho fanentanana hitia ny maha-malagasy ». Io tapany voalohany io indrindra no tiako tsindriana: fanairana hambom-po. Sokajy iray ato anatin’ny blaogy mihitsy izy io ary ahitana lahatsoratra mikasika ny fijery miabo sy ny toe-tsaina mpandresy.
Mivoy ny fijery miabo efa hatramin’ny ela aho. Mpanaraka ireny blaogy miresaka fampivelarana ny maha-olona ireny mihitsy aho ary amin’ny teny anglisy no betsaka hitako. Izany no nitsirian’ny hevitra hamorona blaogy amin’ny teny malagasy miompana amin’io lohahevitra io tamin’ny taona 2016.
Manaraka izany, ny lahatsoratra zaraiko dia tohanako amin’ny traikefam-piainana hatrany na ohatra na teny notsongaina avy amin’olon-kafa manam-pahaizana manokana, mpihira, mpandraharaha, olon-kendry sy ny sisa. Araka ny mahazatra e! Teny malagasy tsotra. Hevitra mora takarina.
Fa nahoana no natao Boky PDF izy ity?
Tiako ny mitrandraka ny teknolojia mba hampiroboroboana ny teny malagasy. Nosafidiana indrindra ary ny hamoaka boky elektronika amin’izao fihibohana izao mba hanamora ny fahazoanao azy. Tsy mila mihetsika ao an-trano ianao fa alefanao ny vola, alefanao ao amin’ny pejy ihany koa ny adiresy mailakao. Raha efa izay, alefako mailaka na Facebook Messenger ilay ebook dia voarainao eo no ho eo.
Aiza no ahitana ity boky PDF teny malagasy ity?
Azo jifaina eto an-toerana sy ivelan’i Madagasikara ny boky ao amin’ny lulu.com.
Raha eto an-toerana ianao dia manasa azonao vidina mivantana ato ny boky elektronika amin’ny vidiny 9000 Ar.
Azonao atao ihany koa ny mividy ao amin’ny pejy Facebook Blaogin’i Voniary amin’ny vidiny 9 000 Ar izay aloa amin’ny Mvola 034 22 766 74.
Ahoana no fomba ahazoana ilay ebook Raiso an-tanana ny fiainanao?
Raha ao amin’ny lulu.com ianao no mividy dia arahinao fotsiny ny toromarika ao.
Raha ao amin’ny Pejy kosa dia halefako mailaka rehefa voaray ny vola.
koa manasa anao ary hanjifa fa izao indrindra no fotoana hamakiana ny boky toy itony hanovozan-kery na hialana voly.
Boky, Fanairana hambom-po, Gasy fiaina
boky Malagasy, boky PDF teny gasy, boky PDF teny malagasy, boky voniary, ebook gasy, ebook malagasy, fampivelarana ny maha-olona, fijery miabo, raiso an-tanana ny fiananao, toe-tsaina mpandresy, varotra boky
4 commentaires sur “Boky Malagasy PDF azonao vakiana mandritra ny fihibohana”
Miarahaba Hividy aho koa mba andefaso laharana finday mba handefasako ny vola 9000ar ary ity no adiresy mail handefasana azy Misaotra Tompoko
20 mai 2020 à 15 h 54 min
034 26 722 74 ny laharana azafady. Aiza ilay adiresy mailaka?